बच्चाहरु संग छुट्टै यात्रा को लागि त्रस-र-परीक्षण सुझावहरु
परिवार यात्रा सुझावहरू र ट्रिक्सहरू
बच्चाहरु संग छुट्टी यात्रा को लागि स्मार्ट आमाबाबु को मार्गदर्शिका
by सुजन रोवन किलेफर
'सीजनलाई प्रेमी हुन सक्छ
ग्र्यानर वूटज / ब्लेंड छविहरू / Getty Images
यदि तपाईंको परिवारलाई धन्यबाद वा क्रिसमस छुट्याउने योजना बनाउनु भएको छ भने, तपाइँले गणना गर्न सक्ने एउटा कुरा हो कि तपाईसँग धेरै यात्रा साथीहरू छन्। यदि यो वर्षको छुट्टीको मौसम हामीले गत सातामा देखेको जस्तो छ भने, हामी हिसाबले राजमार्गहरू, जाम बिरुवा उडानहरू, र खपत मूल्यहरू हेर्न सक्छौं।
चाँदी अस्तर भनेको छुट्टै मौसमको समयमा यात्राको उचाइमा कम गर्न को लागी एक भयानक काम हो। यहाँ रिन्डरर उडान नगरी हाम्रो लागि केहि उत्कृष्ट सल्लाह छ।
एउटा ठाउँ छान्नुहोस् जुन तपाईं ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ
शिखर अवकाशको मौसमको दौडान एयरफेस उच्च आकाशमा जान्छ, हवाईअड्डाहरू भीड हुन्छन्, र उडानहरू पूर्ण हुन्छन्। यदि तपाईं परिवारमा कार ढोकाउन र ड्राइभ गर्न सक्नुहुनेछ, यो कम खर्च गर्न एक उत्तम तरिका हो। कसरी कार भ्रमणहरू बढी रमाइलो र कम परेशान बनाउने बारे सुझावहरूको लागि, बच्चाहरूसँग रोड ट्रिप्सको स्मार्ट प्रोन्टको गाइड हेर्नुहोस्।
बुक होटल्स र उडानहरु ASAP
'मौसममा शीर्ष डलर तिर्नको लागि सिजनमा छुनुहोस्। छुट्टीको अवधिको लागि सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर र नोभेम्बरको बीचमा 20 देखि 50 प्रतिशत वृद्धि हुन्छ। मीठा अन्तिम-मिनेट सौदाको लागि बाहिर हटाउन कुनै बिन्दु छैन, र प्रतीक्षा गरेर तपाइँले आफ्नो वांछित होटल र उडानहरू बन्द गर्नुपर्दछ। सट्टामा, राम्रो समग्र मूल्य खोज्नुहोस् र स्थान, खुला वायुमण्डल, होटल र गतिविधिहरूको सबै भन्दा राम्रो संयोजनका लागि खुला रहनुहोस्।
फ्लाइङ? मितिहरूसँग लचीला हुनुहोस्
लंचटीमामामा / फ्लिकर क्रिएटिव कमन्स
छुट्टै समयमा, किराया स्कूलको क्यालेन्डरहरू मोटेको छ। एउटै क्षेत्रका स्कूलहरू एउटी छुट्टि ब्रेकहरू हुन्छन्, जसको मतलब परिवारले सबैलाई एकै समयमा हेर्न खोज्छ।
आश्चर्यजनक कुरा होइन, सप्ताहांत धन्यवाद र क्रिसमस भन्दा पहिले र क्रिसमस पछि भीड विमानहरु र उच्च मूल्यहरु को डबल व्हाइट को वादा गर्छन। यसबाहेक, यदि तपाईं छुट्टीमा यात्रा गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ-धन्यवाद दिन, क्रिसमसको ईव, क्रिसमस दिवस, नयाँ बर्षको हव वा नयाँ वर्षको दिन-तपाई प्राय: एक राम्रो मूल्यलाई स्न्याग गर्न सक्नुहुनेछ।
अझ कम मूल्यहरू चाहनु हुन्छ? यदि तपाईं आफ्नो बच्चाहरूलाई एक दिन वा दुईवटा स्कूलको सम्झना गर्न चाहानुहुन्छ र ती चोटि छुट्टी हप्तामा भन्दा अघि वा तपाईंको यात्रा मितिहरू सार्न चाहनुहुन्छ भने, यसले मूल्य र आराम दुवैमा एक फरक फरक असर पार्न सक्छ।
यात्रा उद्योगमा, चोटी अवकाश अवधि पछि तुरुन्तै एक अवधि - जस्तै धन्यवाद पछि वा नयाँ वर्ष पछि - " मृत हप्ता " को रूपमा भनिन्छ यदि तपाईंको बच्चाहरु लाई पूर्व-विद्यालयमा रहेका छन् र तपाइँको मितिहरू लचीला छन्, समय तपाईंको छुट्टै छुट्याउने मृत हप्ताको लागि वास्तवमा ठूलो बचत हुन सक्छ।
धेरै रिसोर्ट्सले धन्यवाद सप्ताहांत वा नयाँ बर्ष पछि दाँतका मूल्यहरू घटाउँदछ।
र कम से कम महंगा समय मा एक वाल्ट डिज्नी वर्ल्ड को भ्रमण गर्न को लागी नयाँ साल पछि फरवरी को मध्य सम्म हुन्छ।
कंधे फेला पार्नुहोस्
केहि पश्चिमी स्की रिसोर्ट्स धन्यवाद द्वारा खुला छ।
प्रत्येक मौसमको लागि उच्च सीजनको लागि, कम सीजनमा अर्को स्थान छ। A कोसिस-र-सजिलो पैसा बचत चाल केवल बन्द-सिजन स्थलहरू लक्षित गर्न हो।
अझ बढि सस्ती धन्यवाद दिगो खोज्दै हुनुहुन्छ? क्यारिबियनमा एक समुद्र तट भट्टराईलाई विचार गर्नुहोस्, यो कंधे मौसम हो। अथवा टर्कीको दिन अघि खुला पश्चिमी पश्चिमी स्की पहाडहरूमा प्रारम्भिकबर्ड स्की यात्राको लागि रोज्नुहोस्।
बुद्धिमानी यात्रा टाइम्स छनौट गर्नुहोस्
ryaninc / Flickr Creative Commons
हवाईअड्डा ढिलाइमा दस्तक-सक्रिय प्रभाव छ, दिन पिरोल्न र दोहोरो लगामहरू निर्माण गर्दा पिलिङ्ग गर्दछ। हवाईअड्डा चकलेटमा फिसाउन को लागी तपाईंको सर्वोत्तम सुरक्षा बिहान बिहान छान्नुहोस् र अधिमानतः, गैर-स्टप उडानहरू। यदि तपाइँसँग एक तह छ भने, सामान्यतया जडानको बीचमा अधिक विग्लो कोठा दिनुहोस्।
लागत गणना गर्दा, शुल्क समावेश गर्नुहोस्
जब तपाईं सोच्नुहुन्छ कि तपाईंले कम विमानस्थललाई हटाउनुभयो, तपाईले ठूलो खर्चको लागि बजेटको आवश्यक हुन सक्छ। Airfarewatchdog को एयरलाइन शुल्क चार्टले कसरी एयरलाइन उद्योग बन्यो शुल्क-खुशीलाई थाहा पाउँछ।
सुरुका लागि, तपाईं कुनै पनि सामान जाँच गर्दै हुनुहुन्छ? केही एयरलाइन्सहरू अब लेक-अप बैगहरू चार्ज गर्छन् र सबैभन्दा ठूलो एयरलाइन्सले तपाइँको पहिले जाँच गरिएको बैगको लागि $ 25 खर्च गर्दछ। चार चेक चार थलोको एक साधारण परिवारको लागि, शुल्कले गोल यात्राको लागतमा $ 200 सम्म थप्न सक्छ।
यदि तपाईंसँग एयरलाइन्समा छनौट छ भने, यो विचार गर्नुहोस्: जेटब्युले पहिलो जाँच गरिएको बैगको लागि केही शुल्क लगाउँदैन, र दक्षिणपश्चिमी एयरलाइन्सले प्रत्येक यात्रीलाई दुईवटा थोरै दुई थलो जाँच गर्न दिन्छ।
होटल शोध गर्दा त्यही सिद्धान्त लागू गर्नुहोस्। तपाईंले बुक गर्नुभन्दा पहिले रिसोर्ट फीट र अन्य सर्चार्जहरूको बारे पत्ता लगाउनुहोस् त्यसैले तपाईले चेक आउट गर्दा कुनै खराब आश्चर्य छ।
किताब कब जोडिएको? यो थाहा छ
धेरै ट्रेलरले ट्रिगर खिच्न र आफ्नो उडान बुक गर्न चिन्ता गर्दछन्, त्यो डरले उनीहरूको प्रतिबद्धता पछि खडा हुनेछ। अवकाश अवधिको समयमा, सकारात्मक पूँजीहरूको प्रतीक्षा गर्न नकारात्मकहरू, किनभने उडानहरू बेच्न सकिने मूल्यहरू घट्न सम्भव छैन।
सामान्यतया, तेस्रो-पक्ष बुकिंग साइटहरू मार्फत एयरपोर्टको साथ सीधा बुकिंग गर्न केही फाईदाहरू छन्। यदि तपाईंको उडान विमानस्थलले तपाईंको उडान बुक गर्नुभए पछि, तपाइँ मूल्य फरकको लागि फिर्ती पुन: प्राप्त गर्न सक्षम हुन सक्नुहुन्छ।
Airfarewatchdog एयरलाइन्स भाडा नीतिहरु को लागी एक आसान चार्ट संग जोड दिए छ। सामान्यमा, यदि भाडा उही उही उडानमा उस्तै मूल्य कोटिको बिस्तारै छ भने, केहि (तर सबै) एयरलाइन्सले मूल्य फरक रकम फिर्ता गर्नेछ, कम्युनिस्ट रिभबुकिङ शुल्क फिर्ता गर्नेछ। राम्रो लाग््छ, तर दुर्भाग्यवश, अधिकांश मामलाहरुमा उच्च पुन: बुक शुल्क, सामान्यतया $ 75- $ 200, ले कुनै सम्भावित बचत को सफा गर्दछ।
उज्ज्वल पक्षमा, तीन घरेलू एयरलाइन्स भाडा छोड्ने बेलामा पुन: बुकिङ शुल्क चार्ज गर्दैन। तीमध्ये, दक्षिणपश्चिमी एयरलाइन्ससँग एक विशेष सिधा प्रक्रिया छ जसले तपाईंलाई भविष्य यात्राको लागि वाउचरको सट्टा नगद नगद फिर्ता दिन्छ। यदि तपाइँ चिन्तित हुनुहुन्छ भने तपाईंको भाडामा किताबको पछाडि छोडेर, यो तपाईंको एयरलाइन छनोटमा फ्याक्ट्रीको लायक छ।
यदि तपाईं आफ्नो विमानस्थल ट्र्याक गर्न चिन्ता गर्न चाहानुहुन्छ भने, Yapta.com नामक एक वेबसाइटले तपाईंको लागि यो गर्नेछ, र यदि तपाईं फिर्तीको लागि हकदार हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई सतर्क गराउनेछ।
यो पनि हेर्नुहोस: कसरी यात्रा फिर्ती प्राप्त गर्ने मूल्य जब मूल्य तल पुग्छ
फ्लाइङ? जहाज, पैक नगर्नुहोस्, प्रस्तुत
परिवार र साथीहरू भ्रमण गर्न फ्लाइङ? जबकि यो एक राम्रो विचार हो कि उपहार उपहार आउन को लागी, यो अव्यवस्थित हुन सक्छ।
यदि तपाइँले तपाइँको लिक-अपमा लिपि ल्याउनु हुन्छ भने, सुरक्षा एजेन्टरले तपाईंलाई सोध्न सक्छ कि उनीहरूलाई निरीक्षणको लागि अनपेक्षित गर्न सक्दछ। र तपाईंको जाँच गरिएको सामानमा ठूला उपहारहरू प्याक गर्न सक्दिन मूल्यवान ठाउँ र तपाईं शुल्कमा अतिरिक्त पैसा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ।
धेरै भन्दा उत्तम विकल्प प्रस्तुतिहरू सीधा जहाजमा तपाईंको जहाजमा छ।
विमानमा एकसाथ भेट्टाउनुहोस्
जुहान सोनन / फ्लिकर क्रिएटिव कमन्स
युवा बच्चाहरु संग फ्लाइंग? यो अशिष्ट आश्चर्यको रूपमा आउन सक्छ कि अधिकांश एयरलाइन्स स्वचालित रूपमा सीट परिवार सँगै सँगै छैनन्। भर्खरै क्यूए ए ए स्तम्भमा, मैले तपाइँको बच्चाको पछि विमानमा सिटमा कठिनाईलाई सम्बोधन गरेँ, र मैले यो FoxNews.com यात्रा कथामा यसको बारे पनि लेखे।
यो एयरलाइन्सका लागि अनुकूल भएको छ जसका लागि परिवारलाई सोध्न को लागी सीटहरू छनौट गर्न छनौट गरिएको शुल्कको लागि टोन अप गर्न। यो अपेक्षाकृत नयाँ चार्जले एक प्रमुख वाहकमा प्रत्येक टिकटको लागतमा $9देखि $39 थप्न सक्छ।
चूंकि दक्षिणपश्चिमले सीटहरु असाइन गरेनन, यो एक एयरलाइन रहेको छ जहाँ परिवारहरू सँगै बस्न सजिलो छ। भर्खरको बोर्डिङ क्षेत्र, प्रिन्ट बोर्डिङ कागजातहरू प्राप्त गर्न र हवाईअड्डामा समय बचत गर्न प्रस्थानको 24 घण्टा भित्र अनलाइन चेक इन प्रयोग गर्न सम्झनुहोस्।
जब म सामान्यतया फीस छोड्न सिफारिस गर्छु, छुट्टिको समयमा तपाईले बच्चाको साथ बस्न हुप्स मार्फत हिसाब गर्न रुचाउँदा मनपर्दो सेतो शुल्क तिर्न निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ।
यात्रा बीमा खरीद गर्नुहोस्
केली सिमोरड / फ्लिकर क्रिएटिव कमन्स
तपाईं प्रत्येक यात्राको लागि यात्रा बीमा खरीद गर्न सक्नुहुन्न। तर व्यस्त यात्रा अवधिहरूमा, ढिलाइ, रद्दीकरणहरू, र अन्य तरिका गलत यात्रा गर्न यात्राको अधिक जोखिम छ। यात्रा बीमा अपेक्षाकृत सस्तो छ र अनलाइन किन्न सजिलो छ, र यो तपाईंको यात्राको यात्राको सुरक्षा प्रदान गर्दछ।
फ्लाइलरको रूपमा तपाईंको अधिकार जान्नुहोस्
फ्लाइटहरू रद्द हुने सम्भावना वा व्यस्त छुट्टीको मौसमको समयमा ढिलाइ हुने सम्भावना छ। यदि यो तपाईंको बिदामा हुन्छ भने, एयरलाइनले तपाईंलाई भोजन वाउचर, होटलमा एक रात, वा अन्य कुनै क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दछ? यहाँ तपाईं कसरी हकदार हुनुहुन्छ र पत्ता लगाउन कसरी पत्ता लगाउनुहुन्छ ।
तपाईंको स्मार्टफोन काम गर्न राख्नुहोस्
तपाईको सर्वोत्तम स्रोतहरू तपाईंको जेबमा छ। यहाँ तपाईंको स्मार्टफोन कसरी यात्रा उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्ने छ, र यहाँ परिवारका लागि मेरो मनपर्ने निःशुल्क यात्रा अनुप्रयोगहरू छन् ।
समयमा छोटो छ? एक यात्रा एजेन्सीलाई विचार गर्नुहोस्
अवकाश अवधि उन समय मध्ये एक हो जब एक ट्रैवल एजेंट एक देवता को हुन सक्छ। एक चोटी उडानको मौसमको दौडान निम्नतम विमानस्थललाई शिकार गर्न अविश्वसनीय रूपले निराशाजनक र समय-उपभोग हुन सक्छ, र एक राम्रो एजेन्टले केवल तपाईंको लागि मात्र कार्य गर्नेछैन, त्यो पनि पछ्याउनेछ। धेरै एजेन्टहरू पनि तुरुन्त छूटहरू लागू गर्छन् जुन तपाईंको पुस्तक पछि बाहिर आउछन्, त्यसैले तपाइँ अनिवार्य रूपमा मूल्य सुरक्षित छन्।
कुञ्जी सेवा र माथिल्लो लागतको बारेमा प्रश्नहरू सोध्नु हो। अधिकतर अवस्थामा, डिज्नी बिदाको बुकिंग गर्दा, यो तपाइँले यात्रा विशेषज्ञ प्रयोग गर्न केहि अतिरिक्त खर्च गर्नुहुन्न।
मूल्य खोज्दै हुनुहुन्छ? अवकाश भाडालाई विचार गर्नुहोस्
ब्लू रिज, जर्जिया। HomeAway
जब धेरै स्थान र घरको प्राणी आराम खोज्छ, धेरै परिवारहरू मान-मानसिक उत्थानको लागि छुट्टी भाडामा परिणत हुन्छन्। गृहअधिकारको अनुसार, छुट्टी गृह भाडा सूचीको लागि सबैभन्दा ठूलो अनलाइन बजार, धन्यवाद सप्ताहांतका लागि शीर्ष 10 भन्दा धेरै खोजी गरिएका साइटहरू साबित गर्छन् कि अमेरिकनहरूले पहाडको बस्तीलाई माया गर्छन्।
अवकाश भाडाका लागि शीर्ष 10 धन्यवाद प्राप्त गन्तव्य स्थल
पारिवारिक बीच अवकाशका लागि निःशुल्क मुद्रण योग्य प्याकिङ् सूची
महँगो शहरहरू तपाईं सोच्नुहुन्छ कि तपाईं भ्रमण गर्न सक्नुहुन्न
विशेषज्ञ युक्तिहरू: डिज्नी छुट्टीहरू सँग बच्चाहरु
विशेषज्ञ सुझाव: खाना एलर्जी संग यात्रा
शीर्ष 10 राज्यहरु को बाहिर आउटडोर Getaways
परिवार Getaways + रोमांस
चीज लिन लिस्बन, पोर्चुगलमा
बजेटमा कसरी सेन्ट लुइस भ्रमणको लागि यात्रा गाइड
के म आतंक अलर्टमा मेरो यात्रा रद्द गर्नुपर्छ?
वाशिंगटन, डीसी क्षेत्र मा परिवार मजा गिरें
सेंट लुइस चिडियामा जंगली लाइट्स
TTC टोरंटो एयरपोर्टमा
सैन एंटोनियोमा सर्वश्रेष्ठ होटलहरू
फ्रेसेनो मा क्यालिफोर्निया केन्द्रीय घाटी समलैंगिक गर्व
कुन अफ्रिकी देशहरू भूमध्यमा परेका छन्?
भ्याङ्कुभर घटना नोभेम्बरमा
वान्कोउभरमा सबै चीजहरू गर्ने
सप्ताहांत र छुट्टियों को नियात्रा देखि नियाग्रा फल्स सम्म
थीम पार्क वार्षिक पास भुक्तानी कार्यक्रम